Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha Soosaarka Shiinaha ShiningPlast
Dharka lagu qurxiyo ee loo yaqaan 'ShiningPlast Woven Translucent Greenhouse Fabric' waa qalab ka fiican sidii looga caawin lahaa mashruucaaga kobaca gaarka ah. Sidoo kale waa xulasho ay inta badan adeegsadaan beeraleyda halista ah.
Miisaanka Wejiga: 100 gsm ~ 250 gsm
Xaaladda xidhashada: jet loom
Qalabka lagu daro: Kuleyl kululeyd leh xargaha, baloog yar oo ku dhawaad ​​3 fiid u dhexeeya geesaha oo dhan.
Qiyaasaha: Lagu Sameeyay
Waxaa ku xardhan daah-furnaanta sare ee cufnaanta sare ee polyetylen-ka oo ku dahaaran polyetylen hooseeya waxay bixisaa daah-furnaan weyn taasoo u oggolaaneysa dhirtu inay sifiican u nuugto iftiinka qorraxda.
Waxay sidoo kale ku shaqeysaa daaweynta weyn ee UV si ay uga hortagto xitaa iftiinka qorraxda ee xoogaa meelaha qaarkood waxayna hayn kartaa awood aad u sarreysa muddada dheer. Iyada oo ay ku jirto maadada polyetylenka ceyriiga ah ee weyn, waxay iska caabin kartaa xaddiga heerkulka ballaaran.
Sida codsigaaga ah, ShiningPlast wuxuu sidoo kale bixin karaa xisaabo mesh oo kala duwan oo ah 8 * 8 ~ 16 * 16 si uu u buuxiyo baahiyahaaga kala duwan.
Waxay ka kooban tahay tayo sare oo wax lagu dubo iyo farsamada daaha, ShiningPlast Greenhouse waxay awood u leedahay inay sii ahaato dhisme xoog leh oo waara ka dib isticmaalka muddada-dheer.
.Dalka Suuqa xoqidda ：
Heerka Sare u-ruxaya wuxuu xaqiijiyaa in dharkaaga cagaaran uu xasillan yahay iyada oo aaney jirin wax welwel ah oo ka imanaya jeexitaanka ama jeexitaanka xajmiga oo la beddelay.
· Cimilada u adkaysata ：
Dharka 'Greening' ee loo yaqaan 'ShiningPlast Clear Greenhouse' wuxuu bixiyaa difaacida biyaha iyo ilaalinta muddada-dheer inta lagu jiro cimilada haashka, qaybinta, ama laabida ka dib isticmaalkiisa.
Waxaan fahamsanahay in xasilinta UV ay tahay hantida ugu muhiimsan shuruudaha dharkan. Daaweyntayada weyn ee UV waxay ka dhigeysaa maroku inuu ahaado mid deggan oo waarta xitaa marka laga hadlayo soo-gaadhista UV xoog leh.
Hore: Xaashiyaha Leno Scaffold
Xiga: Loogu talagalay PP Weet Mat